के ईमेलमा एनिमेशन वास्तवमै काम गर्दछ? | Martech Zone
के ईमेलमा एनिमेशन वास्तवमै काम गर्दछ?
बुधबार, अक्टोबर 3, 2012 सोमवार, जुन 8, 2015 मीन बोरिबोने
तपाईंको पाठकहरूको ध्यान खिच्न तपाईंसँग seconds० सेकेन्ड छ एक पटक उनीहरू तपाईंको ईमेलमा क्लिक गर्छन्। यो पक्कै सानो विन्डो हो। यदि तपाईं म जस्तो हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन ईमेल मार्केटिंगको साथ प्रयोग गर्न केही जोखिमपूर्ण छ, तर तपाईं आफ्नो प्रापकको ध्यान आकर्षण गर्न चाहनुहुन्छ। भनेपछि तिमी के गरछौ त?
जहाँसम्म, पछि गएर हाम्रो ईमेल मार्केटिंग प्रायोजकको प्रवृत्ति सचेतता, ईमेल मार्केटर्सको लागि यो प्रभावशाली उपकरण हुन सक्दछ यदि प्रभावकारी रूपमा समावेश गरिएको छ।
एनिमेसन मात्र पाठकहरूको ध्यान आकर्षण गर्न एक उत्तम तरिका हो, तर यसले मार्केटर्सलाई रचनात्मक रूपमा बहु उत्पादनहरू, प्रस्तावहरू, वा कार्यहरूमा कल गर्न ध्यान दिन्छ। तपाईंले पनि यस एनिमेसनले तपाईंको डेलिभरबिलिटीलाई असर गर्न दिनुहुन्न। एनिमेसन आकार सानो राख्नुहोस्, एनिमेटेड GIF केवल mes फ्रेमहरूमा राख्नुहोस्, र निश्चित गर्नुहोस् कि पहिलो फ्रेमले सन्देश संलग्न गर्दछ (यदि त्यहाँ एक छ भने) ताकि तपाईंको ईमेलहरू स्पाम फोल्डरमा समात्न कुनै समस्या नपरोस्।
तपाईंको ईमेलमा एनिमेसन डिजाईन गर्न र वितरण गर्नको लागि थप सल्लाहहरूको लागि, डिलिभ्राको जाँच गर्नुहोस् ईमेलमा एनिमेसन: कसरी प्रभावकारी ढंगमा यस नयाँ ट्रेन्डलाई समावेश गर्ने.
श्वेत पत्र डाउनलोड गर्नुहोस्!
टैग: एनिमेसनईमेल सामग्रीइमेल मार्केटिङसदस्यहरूWhitepaper
मीन एक बटलर मार्केटि student विद्यार्थी हो जुन टोलीसँग इन्टर्निंग गर्दैछ DK New Media। मीनको जिम्मेवारीमा अनुसन्धान र तिनीहरूको ग्राहकहरूको सामग्री उत्पादनको निर्देशन अन्तर्गत समावेश छ जेन लिसाक.
इन्फोग्राफिक र प्रस्तुतीकरण: डिजिटल विज्ञापनको विकास